Vakadzi nemaWheelchair - Vanozvimirira Vakadzi Vanoshandisa Mawiricheya
Kwete kare kare, vanhu vari mavhiripu vakabviswa munzanga uye vakaonekwa sevasipo. Vamwe vanhu vaitombovaona semitoro. Mutsara wepfungwa iyi uchiri kuoneka nhasi uye kuchine vanhu vakati wandei vasingazive kuti vanhu varimo mavhiripu vanhu vakajairika sevamwe vese.
Vanhu vanoita kunge vanoenzana kuve mune wiricheya neimwe mhando yepfungwa kuremara asi izvi hazvisi kana padyo nechokwadi. Mukukosha, avo vari wiricheya akasungwa kwete chete ane chekuita nekuva panyama remara, ivo zvakare vanofanirwa kubata nemaonero asiri iwo eruzhinji.
Chero ani akagadzira iyo wiricheya akaita hupenyu huri nani kwazvo kune avo vari wiricheya yakasungwa uye nekushandura mafungiro evazhinji. wiricheya ita kuti hupenyu hwekunze hunakidze mushandisi uye zvinoita kuti kudyidzana neruzhinji kuve nyore.
zvose wiricheya vashandisi vanotarisana neimwe mhando yekutambudzika, asi nekuda kwechimwe chikonzero vakadzi vanoita kunge vari kubatwa zvakanyanya nekushoropodzwa nekuda kwechimwe chikonzero. Asi kune akati wandei matanho munzvimbo kuti aite kuti vanzwe zvirinani nezvavo.
Zviitiko zvevakadzi vane hurema
Pakave neboka revanhu vanofarira kushandira nharaunda yavo vakaronga mafashoni emadzimai ane hurema hwepanyama. Vakadzi ava ndiyo nyeredzi yekuratidzira uye vanogona kunakidzwa nekutarisisa kwavasingawanzo kuwana. Hembe dzakagadzirirwa ivo chaidzo uye dzinosvika pakutaridzika seyekunaka semukadziwo zvake.
Kune mamwe makwikwi egore akarongerwa aya remara vakadzi, izvo zvinovapa mukana kwete chete kuti vanzwe zvakanaka uye kutaridzika asi zvakare mukana wekujekesera veruzhinji nezvematambudziko anosangana nevakadzi ava mazuva ese uye netarisiro yekuvaita kuti vachinje mafungiro avo.